कृषि विकास बैंकको पौने पाँच करोड चोरी, थप पाँच अर्ब चोरिनबाट बैंक यसरी जोगियो !
कृषि विकास बैंकको पौने पाँच करोड चोरी, थप पाँच अर्ब चोरिनबाट बैंक यसरी जोगियो !
काठमाडौँ - एटिएम प्रणाली ह्याक गरेर चिनियाँ ह्याकरले २ करोड चोरेको महिना दिन नपुग्दै अफ्रिकन ह्याकरको योजनामा सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकबाट झन्डै ५ करोड चोरी भएको छ । अफ्रिकन ह्याकर ‘काले’ भनिने पिटरले भारतको मुम्बईमा बसेर कृषि विकास बैंक सिरहाको लहानस्थित शाखाको ४ करोड ७३ लाख ९६ हजार नेपाली एजेन्टको नाममा पठाएका हुन् ।
सिरहा शाखाको पौने ५ करोड व्यक्तिको नाममा ट्रान्सफर ह्याकरको पहिलो ‘ट्रायल’ थियो । बैंकका सीमित कर्मचारीलाई मात्रै थाहा हुने बैंकको ‘मेकर’ र ‘चेन्जर’ पासवर्ड प्रयोग गरेर ट्रेजरीको रकम निकालिएको थियो । पहिलो योजना सफल भएसँगै पिटरको समूहले ५ अर्ब लुट्ने तयारी गरेको थियो । यही समूह संलग्न अर्को घटनामा पक्राउ परेपछि प्रहरीले सुइँको पाएर योजना असफल पारेको हो ।
रेमिट लुटेरा पक्राउ परेपछि खुल्यो रहस्य
अपराध महाशाखाले बानेश्वरको पानस रेमिट लुट्नेहरूलाई पक्राउ गरेपछि कृषि विकास बैंकको रकम चोरी भएको पत्ता लागेको थियो । महाशाखाका अनुसार गत आइतवार दिउँसो ३ः०० बजे नयाँ बानेश्वरस्थित पानस रेमिटबाट शंकास्पद रुपमा रकम झिकिएको भन्दै सुचना आयो । प्रहरी घटना स्थल पुग्यो । रेमिटकै कर्मचारी सुमिना धितालको पिन कोड प्रयोग गरी अपरिचित चार जनाले ६०–६० हजारका दरले दुई लाख ४० हजार झिकेको अनुसन्धानमा खुल्यो । तर, उक्त पिन कोडमा रकम पठाउने भने कुनै पनि व्यक्ति थिएन । घटना शंकास्पद देखिएपछि प्रहरी थप अनुसन्धानमा लाग्यो । लुटेराले रेमिटको ‘मेकर’ र ‘चेन्जर’ दुवै पासवार्ड प्रयोग गरी रेमिटकै ट्रेजरीको रकम सुमिना धितालको पिन कोडमा पठाएको खुल्यो ।
सोही रकम अपरिचित चार जनाले झिकेको खुल्यो । उनीहरूलाई पछ्याउँदै जाँदा तार्केश्वर–२ काभ्रेस्थलीका २६ बर्षीय सञ्जय घले पक्राउ परे । सोधपुछपछि रकम झिक्नेमा लक्ष्मी लामा, निर्मला तामाङ, निमा तामाङ पनि रहेको खुल्यो । प्रहरीले उनीहरूलाई पनि पक्राउ गर्यो र रेमिटबाट झिकेको २ लाख ४० हजार उनीहरूको साथबाट बरामद गर्यो । रेमिटबाट रकम झिक्न लगाउने नुवाकोट मेघाङ–४ का ४३ बर्षीय लवाङ तामाङ रहेको खुलेपछि प्रहरीले उनलाई पनि पक्राउ गर्यो । सोधपुछपछि तामाङसँग थप ३१ लाख रहेको रहस्य खोले । प्रहरीले ३१ लाख रुपैयाँको स्रोत खोतल्न थालपछि मात्रै कृषि विकास बैंक लुटिएको रहस्य पत्ता लाग्यो । लवाङ अफ्रिकन ह्याकर पिटरका नेपाली एजेन्ट भएको खुलेसँगै कृषि विकास बैंकको ५ अर्ब चोरी हुन लागेको पनि पर्दाफास भयो ।
महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले पक्राउ परेका रेमिट लुटेरामाथि मिहिन अनुसन्धान भएको भए कृषि विकास बैंकको पाँच अर्ब थाहै नपाई ह्याकरको हातमा पुग्ने बताए । ‘हामीले बैंक लुटमा संलग्नहरूलाई अरु नै केसमा पक्राउ गरेका थियौं । फरक खालको क्ल्यू फेला परेपछि थप सोधपुछ गर्यौं । त्यसपछि उनीहरूले कृषि विकास बैंकको रकम झिकेको खुल्यो । घटनामा संलग्न थप पक्राउ गर्यौं । त्यसपछि मात्रै बैंकबाट पाँच अर्व रुपैयाँ लुटेर लैजाने उनीहरूको योजना खुल्यो । यस बेलासम्म बैंकलाई ट्रेजरीको ४ करोड ७३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ झिकिएको सुइको समेत थिएन ।’ घटनामा संलग्न १२ अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
अफ्रिकन ‘काले’को नेपाल कनेक्सन र बैंक लुट्ने योजना
अफ्रिकन पिटर डेढ वर्षअघि काठमाडौं आएका थिए । नेपाली र हिन्दीसमेत बोल्नसक्ने पिटर प्रविधिमा अब्बल थिए । त्यहीबेला उनले कृषि विकास बैंकको ‘मेकर’ र ‘चेन्जर’ पासवर्ड हात पारे । यही हतियार प्रयोग गरेर उनी बैंक लुट्न चाहन्थे । तर, उनलाई आवश्यक थियो, विश्वासिलो नेपाली सहयोगी ।
यही क्रममा काठमाडौंमा रहँदा उनको भेट नुवाकोटका ४३ वर्षीय लवाङ तामाङसँग भयो । पिटर कालो बर्णका भएकाले लवाङले नै उनको नाम ‘काले’ राखिदिएका थिए । लवाङमार्फत् नै नेपाली एजेन्टहरूको खोजी भयो । यो धन्दामा बैंककै खातावालालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे । खाता नभएकाहरूलाई खोल्न लगाए । आवश्यक टिम तयार भएपछि सबै मुम्बई पुगे । बैंक लुट्ने योजना मुम्बईमै बन्यो ।
लुटेको १० प्रतिशत दिनेगरी नेपाली एजेण्ट तयार
बैंकको ट्रेजरीको रकम बैंककै खातावाला एजेन्टको खातामा ट्रान्सफर गर्ने र त्यसको १० प्रतिशत एजेन्टले नै राखेर बाँकी हुण्डीमार्फत् पिटरलाई पठाउने सहमति थियो । त्यसैअनुसार पिटर मुम्बईमै बसे भने अन्य नेपाल फर्किए । कृषि विकास बैंकको लहान शाखा ‘ट्रायल’को रुपमा रोजे । ट्रायल सफल भयो । बैंकको ट्रेजरीमा रहेको ४ करोड ७३ लाख ९६ हजार एजेन्टको खातामा ट्रान्सफर गरे । सौराहाको युजर नेमबाट लहानको कम्प्युटर प्रयोग गरी बैंकको नुवाकोटस्थित शाखा कार्यालयबाट रकम झिकेका थिए । सो रकममध्ये १० लाख न्यूरोडस्थित भारतीय नागरिक शुबन्कर पन्जाको सुन पसलबाट हुण्डी गरी पिटरलाई पठाइयो । यतिबेलासम्म पनि बैंकका कर्मचारीलाइ सुईंको थिएन । लहान शाखाको रकम मुलुकका विभिन्न ६ वटा शाखाका ११ जनाको खातामा रकमान्तर भएको प्रहरीको भनाई छ । प्रहरीका अनुसार कैलाली भजनी, पर्वतको कुश्मा, चितवनको सौराहा, रसुवाको त्रिशुली, काठमाडौंको न्युरोडसहित ६ शाखामा रकमान्तर भएको हो । बैंकले सबै ११ जनाको खाता लक गरिसकेको जनाएको छ ।
प्रहरीले घटनामा संलग्न लवाङ, पुष्पराज खड्का, विद्यासागर लामिछाने, श्रवणकुमार श्रेष्ठ, सुनिता श्रेष्ठ, शुबन्कर पन्जा, बिजय साह, चन्द्रबहादुर बुढालगायत १२ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । तर, घटनाको मुख्य योजनाकार पिटर भने फरार छन् ।
शंकाको सुई बैंककै कर्मचारीतर्फ
कृषि विकास बैंकमा रकम लुटिएको तथा हिनामिना भएको यो नै पहिलो घटना होइन । यसअघि ०७४ मा बैंकको स्वयम्भूस्थित शाखा कार्यालयबाट ३४ करोड रुपैयाँ कर्मचारीकै मिलेमतोमा अपचलन गरिएको थियो । त्यसको बर्ष दिनपछि सोही बैंकको न्यूरोडस्थित शाखा कार्यालयबाट कर्मचारीकै मिलेमतोमा चार करोड ९१ लाख हिनामिना गरिएको थियो । अनुसन्धानपछि दुवै घटनामा संलग्न अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । अहिलेको घटनामा पनि बैंककै कर्मचारी संलग्न हुनसक्ने आशंकासहित प्रहरीले घटनाको फरक ढंगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । प्रहरीका अनुसार बैंकको ट्रेजरीमा रहेको रकम व्यक्तिगत खातामा ट्रान्सफर गर्र्न ‘मेकर’ र ‘चेन्जर’ कोड प्रयोग नगरी सम्भव छैन । उक्त कोड बैंकका कर्मचारी बाहेक अन्यलाई थाहा हुँदैन ।
‘घटनामा बैंकको कर्मचारी पनि संलग्न हुन सक्ने आशंका छ । यसतर्फ ध्यान पुगेको छ । अनुसन्धान हुँदैछ । बैंकले पनि आन्तरिक रुपमा अनुसन्धान थालेको छ । केही न केही तथ्य अवश्य बाहिर आउला,’ अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले भने ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्
बैकका लागि कर्मचारी नै चुनौती
बैंक लुटिने, ठगिनेजस्ता घटनामा बैंककै कर्मचारी संलग्न हुने गरेको विगतका घटना छन् । लहान घटनाले पनि त्यस्तै संकेत गरेको छ । नेपालका बैंक आफ्नै कर्मचारीबाट असुरक्षित छन् । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैकले आफ्नो नियमित अडिटमा पुनर्मुल्यांकन गर्न आवश्यक छ । नत्र यस्ता घटना दोहोरिरहन्छन् ।